अदालतको आदेशअघि नै डिआइजी कार्कीले कसरी थाहा पाए आलमलाई जेल पठाइँदैछ ?
आइतबार मङ्सिर १, २०७६/ Sunday 11-17-19
काठमाडौं । रौतह क्षेत्र नम्बर २ का निलम्बित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद आफ्ताव आलम फौजदारी अभियोगमा जेल चलान भएका छन् । शुक्रबार जेल चलान भएका आलमलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै जिल्ला कारागार रौतहटबाट ललितपुरस्थित नख्खु कारागार ल्याइएको छ । तर, शुक्रबार रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई जेल चलान गर्नु अघि नै यो खबर प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रदुम्न कार्कीले मातहतका प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए ।
१२ वर्ष अघि भएको भनिएको घटनाको सम्बन्धमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा उनलाई शुक्रबार रौतहट जिल्ला अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने जेल चलान गरेको हो । आठ दिन लामो थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। मुद्दामा वादीका तर्फबाट १२ जना र प्रतिवादीका तर्फबाट २८ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
तर, थुनछेक बहस भइरहेका बेला डिआइजी कार्कीले रौतहट प्रहरीलाई आलम जेल चलान हुने भएकाले सुरक्षा व्यवस्था साविकको तुलनामा कडा बनाउनु भन्ने निर्देशन दिएका थिए । अदालतबाट आदेश आउनु अघि डिआइजी कार्कीले आलम जेल जानेबारे कसरी जानकारी पाए ? थुनछेक बहस सकिने र अदालतबाट आदेश आउनेसम्म अनुमान गर्न सकिने भए पनि बहस भइरहेका बेला ‘अलाम जेल चलान हुँदैैछन्’ भन्दै डिआइजी कार्कीले रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्रीलाई सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि रौतहट सदरमुकाम गौरसहित जिल्लाभरको सुरक्षा व्यवस्था पारिएको स्रोतको दाबी छ ।